के इन्टरनेटले हामीलाई बोधो बनाउँदैछ ?
आधुनिक युगमा इन्टरनेट सर्वव्यापी छ । एल्गोरिदम (कम्प्युटरको गणित) का कारण इन्टरनेटले हाम्रो खोज, किनमेल, पढाई र प्रेम अनि विवाहसमेतमा हामीलाई खोजेकै कुरा दिने गरेको छ ।
यस्ता शक्तिशाली एल्गोरिदमका कारण हामी आफ्ना पूर्वाग्रहलाई दह्रो बनाउँछौं र नयाँ, फरक तथा अपरिचित कुरा प्रायः हेर्दैनौं । सिक्ने, बुझ्ने र नयाँ कुरा जन्माउने क्षमतामा यसले ह्रास ल्याउँछ । सजिलो खोज्ने हाम्रो बानीबाट हामीलाई मुक्त गर्नुको साटो डिजिटल क्रान्तिले हामीलाई आफ्नै संसारमा रम्न लगाएको छ र यस क्रममा मौलिकता, स्वच्छन्दता र सिकाईका अवसरलाई बन्द गरिदिएको छ ।
सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त हामीलाई यही अवस्था मन पर्छ ।
हामी अमेजन (सामान खरीद समबन्धी वेबसाइट) मा गएर उसको एल्गोरिदमले जे अह्रायो त्यही सामान किन्छौं । हामी त्यही समाचार पढ्छौं जसले हाम्रो पूर्वविश्वासलाई मजबुत बनाउँछ । अनि हामी डेटिङका लागि त्यही साइट खोज्छौं जसले हामीलाई आफूजस्तै मान्छेसँग भेटाउन मद्दत गर्छ ।
यसरी एल्गोरिदमले बनाएको साँघुरो घेरामा बस्नुका परिणाम साना छैनन् । हामीले यसको बौद्धिक र सामाजिक मूल्य चुकाइरहेका छौं ।
भर्खरै सम्पन्न अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनकै उदाहरण हेर्नुस् । अमेरिकामा राजनीतिक ध्रुवीकरण झन् गहिरिएर गयो किनकि अमेरिकीहरूले आफ्ना पुरानो विश्वासलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण नै खोजिरहे । विभिन्नथरी अमेरिकीहरू एउटै देशमा विभिन्नथरी जीवन बाँचिरहेका छन् । हामीले केही निश्चित समाचार संस्था वा निश्चित विज्ञहरूमा आफूलाई सीमित गरेकाले हाम्रा पक्षपाती विश्लेषण अरूभन्दा नितान्त फरक हुने गरेका छन् ।
साँघुरो दिमागको यो समस्या व्यापार र नेतृत्वमा पनि सरेको छ । खुल्ला विचारले हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यलाई सुधार गर्छ अनि राम्रो निर्णय लिन मद्दत गर्छ भनी अनेकौं अनुसन्धानले बताएका छन् । ठूलठूला कम्पनीका हाकिमहरूको हकमा यो कुरा लागू हुन्छ । उनीहरूले व्यवस्थापन र व्यापार दुवैमा सिर्जनात्मकता अपनाएर ठूला व्यापार सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट जर्नलमा प्रकाशित एक ताजा लेखमा नयाँ अवसरलाई विचार र उपयोग गर्न माथिबाट तल (टप डाउन) र तलबाट माथि (बटम अप) प्रक्रियाको महत्वलाई दर्शाइएको छ । टप डाउन प्रक्रियामा पुराना अनुभवबाट सिक्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ तर तिनले कहिलेकाहीँ आफ्नो क्षेत्रमा भइरहेका अवाञ्छित परिवर्तनमाथि विचार गर्न रोक्छन् । यसको विपरीत बटम अप प्रक्रियामा पहिलेदेखि विद्यमान ज्ञानका बाबजुद वरपर भइरहेका परिवर्तनलाई विचार गर्ने अवस्थाले हामीलाई नसोचेका अवसरमाथि ध्यान दिन र उपयोग गर्न मद्दत गर्छ ।
तर हामी एल्गोरिदमको प्रभावलाई प्रतिकार गर्न सक्छौं । हाम्रो क्षेत्र फराकिलो पार्न अनि व्यावसायिक र निजी जीवनमा खुल्ला दिमाग राख्न हामीले सोचे जत्ति गाह्रो छैन ।
कार्यालयमा तपाईं व्यक्ति नियुक्ति गर्ने प्रक्रियामा ध्यान दिनुस् । अरूभन्दा फरकखाले व्यक्तिलाई छनोट गर्दा, टिममा रहेका व्यक्तिभन्दा फरक सोच्न सक्ने व्यक्ति लिँदा तपाईंले विभिन्न दृष्टिकोणहरू सुन्न पाउनुहुन्छ र नयाँ समाधान वा विचार पाउनुुहुन्छ । एल्गोरिदमले व्यक्तिको बायोडाटामा महत्वपूर्ण शब्द खोज्ने हो तर तपाईं आफैंले प्रत्येक बायोडाटा पढ्ने र फरक किसिमका महत्वपूर्ण शब्द खोज्ने कि ? अझ राम्रो त, भेटिने ठाउँमा आफैं प्रतिभाशाली मान्छे खोज्नुस् ।
लामो समयसम्म सिर्जनात्मकतालाई कायम राख्न तपाईं हाकिम हो भने परिवर्तनलाई अपनाउनुस् । एउटा निश्चित सूत्रका आधारमा कुनै संस्था वा टिमलाई निर्माण गर्नुभन्दा सिद्धान्तहरूको एक सेटका आधारमा संगठन बनाउनुस् । अनि कर्मचारीहरूलाई यिनै सिद्धान्तसँग मेल खाने गरी नयाँ अप्रोच लिएर आउन वा पूरै फरक कुरा लिएर आउन लगाउनुस् ।
सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त तपाईं आफूसँग इमान्दार हुनुपर्छ र आफूले बनाएको मापदण्डमा मात्र सीमित व्यवहार त गरिरहेको छैन भनी जाँच्नुपर्छ । यसो गर्दा बल्ल तपाईंले आफ्नो मापदण्ड बाहिर गएर नियमित रूपमा फरक कुरा छान्नुहुन्छ ।
उदाहरणका लागि अर्कोपाली बाहिर खान जाँदा पहिले नखाएको खानेकुरा चाख्नुस् । पहिलेदेखि हेरिरहेको फिल्मको विधाबाहिरको फिल्म हेर्नुस् । बूक क्लबको सदस्य बन्नुस् । कुनै समारोहमा जाँदा सम्भव भएसम्म आफूभन्दा फरक किसिमको व्यक्तिसँग केही समय कुरा गर्नुस् र उनीहरूलाई के पढ्ने, के खाने र के हेर्ने सिफारिश गर्न लगाउनुस् ।
यसमा तपाईंलाई मद्दत गर्ने केही वेबसाइट र एप्स छन् । उदाहरणका लागि प्रोकोन डट् ओआरजीले विवादास्पद विषयमा फरक फरक तर्क पेश गर्छ भने इयरबिट्स भन्ने एपले तपाईंलाई पहिले सुनिरहेको भन्दा फरक विधामा नयाँखाले संगीतका बारेमा थाहा पाउन मद्दत गर्छ ।
नयाँ कुरा पत्ता लगाउन प्रयास गर्नुपर्छ । एल्गोरिदम र कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) ले हाम्रो आवश्यकताको पूर्वानुमान गर्ने र हाम्रो फोकसलाई साँघुरो बनाउने काम गरिरहेकोमा हामीले नयाँ कुरा सिक्ने र जहाँ पनि अभ्यस्त हुने क्षमता विकास गरेमा काम र जीवन दुवैमा आफ्नो मूल्य कायम राख्न सक्छौं । यसमा लगानी गर्नु वास्तवमै फलदायक छ ।